Vasungwa veAmerica vezvematongerwo enyika muEthiopia Nzara Strike
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waya Nhau Services » Vasungwa veAmerica vezvematongerwo enyika muEthiopia Nzara Strike
Kodzero Dzevanhu • Waya Nhau Services
by eTN Kutungamira Edhita
rakanyorwa eTN Kutungamira Edhita
Jawar Mohammed inyanzvi-akaberekerwa muEthiopian vezvematongerwo enyika vari kuchengetedzwa nehurumende yeEthiopia
Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association (OLLAA) iri kunetsekana zvikuru nenyaya yekuti Jawar Mohammed, Bekele Gerba, nevamwe vamiririri vakamanikidzwa kuramwa nzara vachiratidzira kusungwa kwevatsigiri vavo.
Sekutanga kutaurwa neAddis Standard, vangangoita makumi masere vatsigiri vakasungwa zvichitevera kuratidzira uko vatori vechikamu vakapfeka yero uye vakasangana kunze kweFederal High Court, Lideta Division yeAnti-Terrorism neConstitutional Court. Vatsigiri, vachitora chikamu mune yakakurumbira OromoYellowMovement, vakasungwa ndokuendeswa kunzvimbo yeBalcha Police Station. Zuva rakatevera, Ndira 80, nhengo dzemhuri dzaJawar Mohammed nevamwe vakasungwa vakaziva kuti vasungwa vairamba chikafu kupokana nekusungwa kwevatsigiri vavo.
OLLAA ane hanya zvakanyanya nekusungwa kwevaratidziri vane runyararo uye anomira naJawar Mohammed nevamwe vachishora zviito izvi. Tinoshevedza nharaunda dzenyika dzese kuti dzimanikidze hurumende yeEthiopiya kuti iburitse varatidziri murunyararo vakasungwa zvisiri pamutemo. Kusungwa kwevaratidziri ava vane rugare kunongoratidzira chete kuti hurumende yeEthiopia yakambotsika sei nzira yehutongi.
Pamibvunzo yese ine chekuita nenyaya iyi, tapota nyorera:
Von Batten-Montague -York, LC
Nhau Dzakapiwa Na
Kukadzi 02, 2021, 21:53 GMT
Govera Chinyorwa ichi
Chinotangira EIN Presswire ndiko kubuda pachena. Hatibvumire vatengi vasingafadzi, uye vapepeti vedu vanoedza kungwarira nezvekusakura zvemanyepo uye zvinotsausa zvemukati. Semushandisi, kana iwe ukaona chimwe chinhu chatakarasikirwa, ndokumbirawo uuye nacho kwatiri. Rubatsiro rwako runogamuchirwa. EIN Presswire, Wese weInternet Nhau Presswire ™, inoedza kutsanangura mimwe miganho ine musoro munyika yanhasi. Ndokumbira kuti uone yedu Nongedzo Dzenongedzo mamwe mashoko.
eTN Kutungamira Edhita
eTN Managing basa mupepeti.
Czech Republic inogamuchira vafambi veUS vadzoka
Vashanyi Vanowana Phuket Husiku Hupenyu Hunopera Pakarepo pa9
Kiribati inochengeta miganhu yakavharwa asi kudzidzisa vaenzi ...
Kuenzanisa kushambadzira kwekushanya nekuchengetedza zvinodiwa